AndEX 10 ikozvino inoita kuti umhanye Android 10 pane yako PC | Linux Vakapindwa muropa
Arne Exton yadzokororazve vhezheni itsva yeaya mashandiro anoita kuti ive yakakosha. Inenge mwedzi mipfumbamwe mushure UyeEX Pie, mugadziri ane mukurumbira akakanda uye EX 10, iyo nyowani vhezheni yayo yekushandisa system yakavakirwa paGoogle nhare mbozha iyo zvino yave kubva paiyo Android 10. Kuti ive yechokwadi, AndEX forogo ye Android-x86, chirongwa chepakutanga chinotibvumidza kumhanyisa Android pamakomputa.
Exton inoti AndEX 10, yakanyorwa kubva = Android-x86_64, inokwanisa kumhanya e kuiswa mune angangoita ese matsva malaptop pamusika, pamwe nemamwe makomputa edesktop. Pakati pemakomputa akatsigirwa, mugadziri akataura nezveAcer Aspire, HP, Samsung, Dell, Toshiba, Lenovo Thinkpads, Fujitsu, Panasonic naAsus. Kune rimwe divi, rinoenderanawo nehurongwa hwekushandisa software yekuteedzera, senge VirtualBox kana VMware.
AndEX 10 yakakwira
Kubva pa Android 10.
Kuisirwa rutsigiro rwemabhuku mazhinji matsva, mamwe makomputa edesktop, uye anoshanda masisitimu ekuteedzera.
Zvitsva zvakaiswa maapplication, seAptoide, Spotify, F-Droid, Angry Shiri, YouTube.
GAPPS yakaiswa, iyo inotipa mukana weGoogle maapplication uye masevhisi akadai seGoogle Play.
Inonzwisisika yakavandudzwa kurira uye odhiyo kuita.
Asi pane dambudziko: AndEX 10 ane mutengo we € 9, sezvauri kuona mu batanidzo yako download. Kana Exton yaisa mutengo pairi, imo nekuti kune vanhu vanofarira chaizvo kumhanyisa Android paPC yavo, kunyangwe ini ndisiri mumwe wavo kana zvisiri zvekuita bvunzo. Chinhu chakanaka chekubhadhara software ndechekuti isu tichawana rutsigiro, izvo zvinovimbisa kuti isu tinogona kuzadzisa chinangwa chedu chekushandisa Android paPC yedu zvine mutsindo kana kuti tinowana mari yedu kudzoka (kana zvakadaro zvazvinofanirwa kuve).
Ungabhadhara here kuisa Android 10 paPC yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » AndEX 10 yatobvumidza iwe kumhanya Android 10 paPC yako
Chii? Tinofanira kubhadhara? Kwete kunyange fart ...
Hapana kana kobiri zvaro.
Kana mumwe munhu ainayo, regai vaiise iyo hahaha robin hood, kwaziso kubva kuNeuquen, Argentina
Pindura kuna Armando
Johani. 50 akadaro
Zvakanaka, asi software yekuvandudza uye yekugadzirisa mutengo uye pane mumwe munhu anofanira kuibhadhara here?
Pindura Juan. 50
kana chiri chokwadi chinoshanda sezvazviri kutaurwa, hongu kana zvaizobhadhara, asi unofanira kutanga wazviedza, sezvo vamwe vasingashande sezvazvinotaurwa, uye ivo vakanyadziswa
Oscar Farias akadaro
Izvo hazvina kundishandira. Ndakaedza kuisa vhezheni 9 ne10 uye handimhanye pa1th chizvarwa chehurumende mambure komputa, iyo yandinowanzo shandisa kuyedza isingatariswe masisitimu anoshanda. Inoramba iri mune OS mutoro chete. uye inotangazve. Ndakaedza kuiisa neGRUB yekaviri bhutsu uye ndakazopedzisira ndisina maviri mashandiro. Ndinovimba vachaburitsa chimwe chinhu munguva pfupi chinomhanya pane chero komputa sezvo iri yakanaka hunyanzvi.
Pindura kuna Oscar Farias
Kuenderera mberi neiyo Photoreading. Uchishandisa yakavhurwa sosi yekukurumidza kudzidza
Iyo nyowani vhezheni yeDXVK 1.5.1 inouya nekumwe kuvandudzwa kwemamwe mazita